Xog..Gen Gabre iyo qaswadayaasha Nairobi ku shiray iyo Siyaasi caana oo shirqool loo maleegayo | Salaan Media
Xog..Gen Gabre iyo qaswadayaasha Nairobi ku shiray iyo Siyaasi caana oo shirqool loo maleegayo
Nairobi (SM) – Kulan aan caadi aheyn ayaa maanta ka dhacay Hotelka Laico Regency oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kulankan xasaasiga ah ayaa dhexmaray u qeybsanaha dowlada Itoobiya ee arrimaha Somalia Jeneral Gabre iyo qaar ka mid ah siyaasiyiin xilal isugu jira raisul wasaarayaal iyo wasiiro ka soo qabtay dowladihii KMG ahaa ee dalka soo maray.
Xubnaha ka qeyb galay kulanka ayaa waxaa ka mid ahaa Prof. Cali Maxamed Geeddi iyo Cumar C/rashiid oo labaduba raisul wasaareyaal ka soo noqday dowladihii KMG ahaa, Prof. Maxed Cabdi Gaandhi oo isna wasiirka Gaashaandhiga ka soo noqday dowladahaas iyo qaar kale.
Si rasmi ah looma oga waxyaabaha looga hadlayey kulankaas, hase ahaatee warar laga helayo ilo wareedyo ku dhow xubnaha ka qeyb galay ayaa sheegaya in kulanka uu ahaa mid siyaasiyiintaas ay ku xoojinayeen dacwad ka dhan safiirka dowlada Somalia u magacowday dalka Itoobiya Axmed C/salaan oo ka timid maamulada Puntland iyo Jubba-land.
Labada maamul ayaa Itoobiya ugu baaqay ineysan aqbalin safiirnimada Axmed C/salaan oo ay sheegeen inuusan aheyn diblomaasi xiriir wanaagsan la leh maamulada dalka ka jira oo dhan, uuna yahay nin u janjeera oo kaliya dowlada Somalia.
Tani waxa ay dadka qaar ku macneeyeen cabsi xooggan oo labadaas maamul ay ka qabaan siyasaadda cajiibka ah ee Axmed Cabdisalaan, oo magacaabistiisa ay u arkeen gabalkoodii oo dhacay.
Siyaasiyiintan Soomaalida ah ee ku sugan Nairobi oo mudooyinkan loogu yeerayey qaswadeyaal ayaa Jen. Gabre u sheegay in eedeymaha loo jeedinayo Axmed C/salaan ay yihiin kuwo run ah, uuna xumaan doono xiriirka Itoobiya iyo maamulada dalka ka jira haddii ay Axmed C/salaab u aqoonsato safiirnimo, sida ay ku doodeen.
Lama oga jawaabta uu arintaas ka bixiyey Jen. Gabre oo wax badan ka yaqaana siyaasadaha isbed-bedelaya ee Soomaalida, hase ahatee siyaasiyiintan iyo safiirka dowlada magacowday dalka Itoobiya Axmed C/salaan ayaa labadaba xiriir wanaagsan la leh dowlada Itoobiya.